Yehowa Adansefo Abakɔsεm ne wɔn Mmusude – 4Jehovah (Yehowa)
Yehowa Adansefo Abakɔsεm ne wɔn Mmusude
Yehowa Adansefo – abakᴐsԑm ne gyidi
Anohyeto ahorow yi ne nnesoa a wɔde to Yehowa adansefo so no ma wɔtwe wɔnho fi nnipa ne abusua nkae ho, enti Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde bԑyԑ wɔn biribiara wɔ wɔn asetram. Sԑ Yehowa adanseni bi bu wɔn akwankyerԑ anaa Bible mmara so a wɔpam no fi Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde no mu. Eyi nti obiara, sԑ abusuani, anuanom ne adɔfo nyinaa ne no nkasa, wᴐn ne no ndidi na mpo wɔakyia saa nnipa.3. Wɔ nnipa bebree fam no eyi yԑ tebea ne osuahu a ԑyԑ yaw kyԑn biribiara ma mpo ԑmma wɔte nka sԑ wɔabrabɔ nni mfaso bio. Esiane saa mmara ne nhyԑ a Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde no de to Yehowa adansefo so no ma Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde nya Yehowa adansefo honam ne honhom fam asetra kwan so tumi, eyi nti ԑho hia kԑsԑ sԑ obi bԑyԑ nhwԑhwԑmu torodoo wɔ nea Ɔwԑn Aban Asafo no kyerԑkyerԑ ne nabakɔsԑm ansa na ɔde ne ho ato so.
Yehowa Adansefo - abakᴐsԑm ne gyidi
HENANOM NE YEHOWA ADANSEFO? -Wᴐn Abakᴐsԑm, Gyidi Ne Amanne
1. ϽWԐN ABAN AHYEHYԐDE NO ABAKϽSԐM:
Karles Taze Russell (Nea ᴐde Ͻwԑn Aban Ahyehyԑde baae) wᴐwoo no wᴐ afe 1852.
Wᴐ afe 1870 no Russell suae Sekond Adventists nkyerԑkyerԑ ne amanne ahorow fii nnipa atitiriw, te sԑ George Storrs, Yonah Wendell, George Stetson ne Nelson Barbour.
Afe 1879: Russell hyԑe ase tintimii Zion Ͻwԑn Aban ԑbᴐ Yesu Kristo mae ho daruwu (Eyi dii Ͻwԑn Aban Ahyehyԑde no anim)
Afe 1881: Wᴐde Zion Ͻwԑn Aban kᴐkaa mmara kwan so Ahyehyԑde ahorow ho ma wogyee toom, na ԑno bԑyԑԑ Ͻwԑn Aban Bible ne Nhomawa Asafo wᴐ Pennsylvania (Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania)
Afe 1909: Woyii Ͻwԑn Aban Ahyehyԑde ahenkrow Ti (Headquaters) no kᴐe Brooklyn, New York Watch Tower Bible and Tract Society.
Afe 1916: Owura Karles Taze Russell wui.
Afe 1917-1942 wonyae Ͻwԑn Aban Ahyehyԑde Panyin a ᴐda ano (President) a ԑto so abien, ᴐtemmufo Yosef F Rutherford.
Wᴐ afe 1931: Wᴐpawee abodin ‘Yehowa Adansefo’.
Afe 1942-1977 Wonyae Ͻwԑn Aban panyin a ᴐda ano a ԑto so abiԑsa a ne din de Nathan H Knorr.
Afe 1978-1992: Wopawee Ͻwԑn Aban Panyin a ᴐto so anan, a ᴐne Frederick W. Franz.
Afe 1992-2000 Woyii Ͻwԑn Aban so panyin a ᴐto so anum, a ᴐne Milton George Henschel.
Afe 2000: Wᴐyԑԑ nsakrae wᴐ Ͻwԑn Aban Ahyehyԑde nhyehyԑemu:
This post is also available in: SpanishPortugueseCzechItalianRussianGermanBorɔfo